Taliyaha ciidanka Sudan oo gaaray xadka Itoobiya - Hargeele - Wararka Somali State
Taliyaha ciidanka Sudan oo gaaray xadka Itoobiya
Muqdisho (SONNA)-Taliyaha ciidanka Sudan Lt Gen Maxamed Cusman Al-Xuseen ayaa maanta gaaray xuduudka Sudan ay Itoobiya la leedahay.
Saxaafada Sudaan ayaa sheegtay in dhawaanahan ay xuduuda ka jirto qalaalaso ay wadeen ciidanka Itoobiya iyo maleeshiyo Itoobiyaan ah kuwaas oo dad rayid ah ku laayay deegaanka bariga Sudaan.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo xiisada xadka ku saleysan ee u dhaxeysa labada dal ay iminka gaartay meel adag.
Itoobiya ayaa Sudaan ku eedeysay in ay ku xadgudubtay dhulkeeda halka Sudaan ay sheegtay in ay soo ceshatay xuduudeeda caalamiga ah ee la aqoonsanyahay. Labada dal ayaa isku haya dhulka beeraha hodanka ku ah ee Al-Fashqa.
Wasiir Duraan “Waxaa naga go’an Isl-xilqaan inuu gaaro dhammaan xarumaha adeegga Qaran”
Madaxweyne Waare iyo James Swan oo kawada hadlay arrimo dhowr ah+Sawirro
Wasaaradda Boostada XFS oo soo dhoweeysay kaalinta uu dalku ka galay adeegsiga qiimaha internet-ka
Suxufiyiin ka socda Qaaradda Afrika oo Tababar uga furmay dalka Turkiga+Sawirro